watchOS 6.2.1 inogadzirisa chinetso cheFaceTime paApple Watch | Ndinobva mac
watchOS 6.2.1 inogadzirisa FaceTime nyaya paApple Watch
Apple yakaburitsa itsva yekuvandudza yeApple Watch iyo gadzirisa dambudziko neFaceTime. Kubva pakuonekwa kwayo, iri rave dambudziko rakapararira pamidziyo yese yeApple. Ehezve, ivo vakatogadziriswa nezvitsva zvitsva. Ndokusaka yakatangwa zvakare mamwe marongedzero e macOS 10.15.4
watchOS 6.2.1 inouya kugadzirisa dambudziko rakapararira neFaceTime
Pamwe pamwe neyekuwedzera macOS 10.15.4 yekuvandudza yeApple makomputa, yakaburitsa zvakare software nyowani yeApple Watch. WatchOS 6.2.1 Yakaburitswa nguva pfupi yapfuura iyo yakatangira iyo yaisanganisira zvimwe zvitsva zveiyo wachi.
WatchOS 6.2 Yakauya neIAP rutsigiro rwewatchOS maapplication. Inowedzerawo ECG uye isina kujairika moyo rhythm rutsigiro paApple Watch Series 4 uye Series 5 kuChile, New Zealand, uye Turkey. Pamusoro pezvo, iyo inogadziridza inogadzirisa nyaya apo kutamba kwemimhanzi kunogona kumira kana uchichinja kubva paWi-Fi kuenda kuBluetooth yekubatana. Chekupedzisira, iyo yekuvandudza zvakare yaisanganisira ye-mukati kutenga kubva kune iyoOSOS App Store.
Zvinogona kutaurwa ipapo kuti watchOS 6.2.1 idiki diki inoburitswa nekambani, asi zvakakosha kwazvo. Vanouya kuzogadzirisa dambudziko rakamuka neFaceTime. Iyo bhagi haina kubvumira Apple Watches inomhanya watchOS 6.2 kutora chikamu muFaceTime odhiyo mafoni pane zvishandiso zvine akura iOS uye Mac anoshanda masystem.
watchOS 6.2.1 inogona kutorwa pasi nekuiswa kuburikidza neye iPhone's pachayo application. Tinofanira kungoenda General> Software kugadzirisa. Ramba uchifunga kuti iyo Apple Watch inofanira kunge iine angangoita 50 muzana bhatiri simba uye inofanira kunge iri padyo neyaviri pairi.
Ya zvishoma kuruboshwe kwemaowOs 7 iyo inofanirwa kuunzwa kuWWDC 2020 muna Chikumi uye iyo inofunga kutsva uye kwakanaka. Zvimwe zvacho zvinotarisirwa nevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6.2.1 inogadzirisa FaceTime nyaya paApple Watch
ada uribe akadaro
Ndinovimba kuti mune idzi gadziriso iyo yekuvandudza ichauya kuitira kuti iyo electrocardiogram ishandire Mexico: /
Pindura ada uribe
Safari Technology Preview 104 ikozvino yavapo
Apple Inosunungura Yekuwedzera Yekuvandudza kune macOS 10.15.4